बितेको २४ घण्टामा देशभर १ हजार २०४ जना कोरोना संक्रमित थपिए, देशभर कुन जिल्लामा कति ? (विवरणसहित) – Kanika Khabar
बितेको २४ घण्टामा देशभर १ हजार २०४ जना कोरोना संक्रमित थपिए, देशभर कुन जिल्लामा कति ? (विवरणसहित)
Kanika Khabar ३ आश्विन २०७७, शनिबार १६:२१ September 19, 2020 मा प्रकाशित
असोज ३, काठमाडौं
बितेको २४ घण्टामा देशभर १ हजार २०४ जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् । शनिबारको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतमले आज थपिएका संक्रमितसहित संक्रमितको कुल संख्या ६२ हजार ७९७ पुगेको गौतमले जानकारी दिए ।
यस्तै बितेको २४ घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा ७११ जनामा कोरोनाभाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
संक्रमितमध्ये काठमाडौँका ५७०, ललितपुरका ५८ र भक्तपुरका ८३ जना रहेका छन् ।
यस्तै पछिल्लो २४ घण्टामा १ हजार ४४७ जना निको भएका छन् भने हालसम्म निको हुनेको कुल संख्या ४५ हजार २६७ पुगेको गौतमले बताए । यसैबीच कोरोनाबाट थप ११ जनाको मृत्यु भएको छ । यससँगै कोरोनाबाट नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या ४०१ पुगेको गौतमले बताए ।
यस्तै आज देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या १७ हजार १२९ रहेको छ । जसमा संस्थागत आइसोलेशनमा ९ हजार १५३ जना र होम आइसोलेशनमा ९ हजार ९७६ जना रहेका छन् । यस्तै आज १०,३३३ जनाको पीसीआर परीक्षण भएको छ ।